Midowga Yurub oo go’aan ka duwan midka Maraykanka ka qaatay dalka Somalia | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka Midowga Yurub oo go’aan ka duwan midka Maraykanka ka qaatay dalka Somalia
Midowga Yurub oo go’aan ka duwan midka Maraykanka ka qaatay dalka Somalia
(Brussels) 10 Jan 2021 – Xilli ay Maraykanku bilaabeen inay ciidankooda oo dhamaa 700 oo askari kala baxaan Somalia, Midowga Yurub ayaa kordhiyey waqtiga ay ciidamadu ka joogayaan Somalia.
Barnaamijka EUCAP Somalia, oo mid lagu dhisayo mugga Booliiska Somalia; EUTM Somalia, kuwa Xoogga iyo Howlgalka ay ka wadaan badaha Somalia ee la yiraahdo, ayaa la gaarsiiyey ilaa 31-ka Diseembar 2022-ka.
Go’aankan ayaa salka ku haya dib u eegis guud oo lagu sameeyey Amaanka Guud iyo Istaraatijiadda Difaac ee CSDP ee Somalia iyo Geeska Afrika, kaasoo la sheegay in lagu xoojinayo jawaab bixinta deg degta ah ee EU oo ka mid ah dadka ilaaliya amaanka aaggaasi, sida uu warku u qoran yahay.
Go’aankan ayaa khilaafaya midkii Donald Trump uu ciidamadiisa uga saaray Somalia, isagoo muujinaya in EU oo bixisa inta badan kharashka ku baxa AMISOM aysan doonayn inay ka tagto Somalia oo ay ragaadiyeen dagaallo ku dhisan khilaafyo meelo kala duwan salka kula jira oo ay horseed ka yihiin siyaasiyiin Soomaali ah oo tooda gaarka ah eeganaya.
Previous articleDF Somalia oo isku khilaafsan in doorashada la qabto iyadoo aan xal laga gaarin muranka taagan
Next articleWhatsApp oo bisha soo aaddan bilaabaya siyaasad cusub oo HALIS ku ah xogahaaga gaarka ah (Iska eeg)